Injineer Girmaa Xurunaa Irratti Yakka Seenaatu Raawwatame – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsInjineer Girmaa Xurunaa Irratti Yakka Seenaatu Raawwatame
# Injineer_Girmaa_Xurunaa Irratti Yakka Seenaatu
Madda Odeeffannoo Komishinii Poolisii Federaalaa Kutaa Qorannoo Komishinii Poolisii Oromiyaa
SEENAA GABAABAA Yeroon ammaa kun yeroo barattootni Oromoo Kutaa 12ffaa qabxii itti baratan waan taheef seenaa dubduubbee fi sadarkaa barnootaa Injineer Girmaa Xurunaa jalqaba yoon kaase wayya.
Gurbaan Kun dhalootaan Godina Horroo Guduruu yoommuu tahu barnootaan qaxalee fi qabxii olaanaa fiduudhaan yuunibarsiitii Haramaayaa seene .Bara 2000 Akka Lakkoofa Itoophiyaatti faculty Engineering keessaa qabxii olaanaa galmeessuun barnoota dabalataa ijoollee Oromoof kennaa ture.Rakkoo ABO keessatti Bara 2002 mudate gama barattootaan qabsoo Oromoo balaa kufaatii irraa hambisuuf sochiin barattootaa eegale. Innis yeroo kanaa kaasee adda durummaan keessatti hirmaachuun bara 2003 Jaarmayaan Qeerroo Bilisummaa Oromoo wayita labsamu walitti qabaa tahuun gaggeessuu eegale. Haa tahu malee iccitiin ijaarsaa fi hundeeffama Qeerroo Bilisummaa Oromoo Harka diinaa bu’uu hiriyyaa isaa Dachaasaa Wiirtuudhaan saaxilame.
Innis Harka diinaatti kufuun ji’oota afuriif mana dukkanaa erga tursiifamee mana murtiitti hiyaate. Mana Murtiitti Nuti Qabsoo Karaa nagaa gaggeessina;Dhagaa Hin Darbannu; Qabeenya Namaas Hin Saamnu wayita jedhu ABO tahee kan hin saamne jiraa? jechuun mana hidhaa dukkanaatti isa deebisu. Jaallan isaa irratti inmoo ragaa baheera jechuun olola qindeessuun
eegalame. Turtii mana hidhaa dukkanaa keessaa uffata ija isaatti maranii baasanii daandii irratti gatan. Innis gara Yuunivarsiitii Haramaayaatti deebi’uun barnoota isaa erga raawwatee booda qabxii gahaa waan qabuuf Yuunivarsiitii Haramaayaatti barsiisummaadhaaf hafe. Injineer Girmaan
uummata Oromoo Raayyaa gaafa guyyaa ayyaana sabaa fi sablammii Oromoo waliin akka hiriiran qindeesse.Bulchinsi Yuunibarsiitii Haramaayaas ati ABO waan taateef mooraa kana
nuuf lakkisi jechuun hojii akka dhaabu taasifame. Innis gara magaalaa Finfinnee dhufuun Qeerroo Bilisummaa Oromoo hoogganuun qabsoo itti fufe.Tikni Mootummaa wayyaanee hordoffii bilbilaa fi imeelii taasistu application hojjechuun miliqaa ture. Bobaa diinaa jalatti qabsoo Qeerroo lafa qabsiisuuf Tamsaasa Raadiyoo Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromoo; Hawwisoo Qeerroo Bilisummaa Oromoo fi Baandii Tokkummaa hundeessuun qabsoon maaster pilaanii akka
finiinu taasise. Tikni Wayyaanee ijaarsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo argachuuf sakatta’a guddaa gaggeessaa turte hordoffii irratti jabeessuun bara 2007 irra deebiin mana hidhaatti ukkaamfame. Dhiittaa dhala namaaf hin malle ji’oota saddeetiif mana dukkanaa keessatti gidirfamaa erga turee gad lakkifama. Wayita gad lakkifamu qabeenyaa manaa fi dokumentii barnootaa isaa hunda saamuun ture. Innia Hiriyyaa isaa kan tahe artist Girmaa Xurunaa bira qubate. Hidhaatii haa
gadhiisan malee wayyaaneen kiyyoo qopheessoteefii jirti.
Karoorri Kun qabsoo Qeerroo gufachiisuun maaster pilaanii hojii irra oolchuuf Waraabessicha Geetachoo Asaffaadhaan Karoorfame. Karoorichi yeroo Injineer Girmaa Xurunaa mana
hidhaa dukkanaa keesssa jiru Qeerroo ijaaranii yeroo inni ba’u ijoollee qabanii isatu qabsiise jedhanii akka inni hin amanamne darbees wayyaaneef akka jilbeeffatee hojjetu gochuu ture.
Karoora Geetaachoo Asaffaa Kana kan Hojiitti hiiku wayyaanticha Tasfaayee Urgee kan Dr. Abiy irratti boombii darbachiise;Ergamas isaa kab tahe Yoomiyyuu kan federaala Qopheessee alaabaa fide akkasumas dhimma nageenyaa Oromiyaa Yeroosii dhimma Nageenyaa federaalaa ammaa kan tahe dhiiga ijoollee Oromoo Kan dhugaa jiraate Dammalaash Gabremikaa’el Gabrakiristoosi dha. Aktivistootnii fi Sabboontotni Oromoo shira qabsoo oromoo kolaasuuf hojjetame kana hin hubanne kan WAYYAANEEN nutti himtu fudhannee Girmaa facebook fi miidiyaa irratti balaaleffanne.
Dhugaan kun waggaa kana ifa bahus OPDOn Girmaa Xurunaa Mana Murtiitti osoo hin dhiyeessiin waggaa lamaaf mana qofaatti humna addaa poolisii oromiyaa kaampii keessatti akka
hidhamu taasisuun yakka seenaa irratti raawwachaa jirti. Sababni Inni hidhaa keessatti mana murtii malee taa’uuf inni guddaqn GAAFFII DHIMMA NAGEENYAA OROMIYAA KEESSATTI HOJJEDHU jedhamee gaafatame fudhachuu waan dideefi. Kana malees bara 2005 irraa kaasee Obbo Lammaa Magarsaa waliin walitti dhufeenya qabaachuun isaa OPDOn yoo hidhaatii bahe iccitii keenya ABOf kenna jetteeti sodaatti. Namni tokko yakkaan Shakkamee yoo to’atame sa’
a 48 keessatti mana murtiitti dhiyaachuu qaba ture. Injineer Girmaa Xurunaa waggaa lamattuu mana murtiitti hin dhiyaanne. Namni Dubbisuun hin danda’amu. Seerri jiraa??? Yakka Seenaa jalaa rabbi nu haa baasu. Waan Injineer Girmaa Xurunaa seenaa barreeffamee hin dhumne harka keessaan qaba. Itti fufa Injineer bakka jirtutti jajjabinan siif hawwa.